Vakashela iHaninge - Imicimbi nezinto okufanele uzenze eHaninge
Mayelana nokuvakashela haninge
Imihlangano yaminyaka yonke
Awunayo imicimbi ohlwini.
Thola i-haninge Facebook
Umdwebo ophelele e-Frönäs, Gålö 28 May ngo-11 am
Bona, yenza futhi uhlangabezane nakho
I-Naturpasset ne-Cykelpasset - Iphumile emvelweni bese uzama i-orienteering
Funda ukuhamba ngomkhumbi eDalarö
Thenga futhi uthenge
Amabhokisi enyama anenyama yemvelo edlisiwe evela epulazini laseTyresta
Indawo yokuhlala nendawo yokuhlala
I-Quality Hotel Winn - Ukulala ebusuku eduze kwendawo enhle engaphandle yaseRudan
Bhuka umhlahlandlela eTyresta - Ukufa kuyaphila ehlathini lokuqala
Bona futhi wenze
I-Hembygdsföreningen enathi ku-Gålö ibizwa nge-Gålö Gärsar Hembygdsförening. Sisebenzela ukugcina umlando ka-Gålö uphila, ukuthi i-Gålö kufanele ibe indawo esebenzayo yabahlali nezinkampani ezincane ukuze sakhe ukuxhumana okuhle phakathi kwezakhamuzi. Kungani igama elithi Gärsar? Imvubelo inhlanzi. Ezikhathini zasendulo, intsha yakulesi siqhingi yayibizwa ngokuthi i-Gärsar, ngokungafani nentsha yasezwekazini eyayibizwa ngokuthi Amagwababa. I-Gålö Gärsar yasungulwa ngo-1984. Kusukela ngo-2004 siye saba nezindawo zethu lapha epulazini laseMorarna. Sinemisebenzi eminingana eyahlukene ngaphakathi kososeshini ..
EHäringe Castle ungaphila njengenkosi. Noma kungani hhayi njengenkanyezi ye-movie egumbini elilodwa likaGreta Garbo, kwasekuqaleni kusukela ngawo-1930. Amakamelo ehhotela atholakala ezungeze inqaba nasezigabeni eziningi ezahlukahlukene; konke kusuka kumagumbi angabodwa kuya kumagumbi e-deluxe nakuma-suites. Ungahlala ngokuhlukile endlini yakho nengadi yayo, indlu yokugezela enkulu nekhishi elinakho konke. IHäringe itholakala kahle futhi idyllically imizuzu engama-25 eningizimu yeStockholm. Lapha, idolobha elikhulu lizizwa likude kakhulu lapho uhamba phezu kwezigodi ezinkulu, eduze komnyango weziqhingi kanye nendawo enkulu yemvelo. Lapha kulula ukujabulela futhi uphumule.
IHaninge iyakhula futhi njengamanje isibalo esikhulu semizi kanye nendawo entsha yamabhasi iyakhiwa eduze kwesiteshi sesitimela sabagibeli. Enkabeni yedolobha laseHaninge, kunenqwaba yemisebenzi nokukhetha. Eduze kwesikhungo saseHaninge kunendawo engaphandle iRudan, okuyindawo ebhekele imvelo. Lapha ungakwazi ukubhukuda, udobe izinhlanzi eziyigugu, ukhuphuke iluphu elikhubazekile, ukugijima nebhayisikili lezintaba noma uzivocavoca ejimini yangaphandle. Ebusika, indawo ivakashelwa kahle ngabashushuluzi nabashushuluza eqhweni. Endlini yesiko laseHaninge uzothola imibukiso kugalari yobuciko nemisebenzi yabancane nabadala kanye nomtapo wezincwadi ogcwele kahle.
I-Blue Zense Yoga nokuzivocavoca umzimba
Sinikeza imisebenzi ehlukahlukene eyoga nokuqeqeshwa komuntu kokubili emanzini nasemhlabeni endaweni yeziqhingi eziseduze nolwandle eDalarö nendawo ezungezile. Nge-subsidiary Ryttarform, sinikeza ukuqeqeshwa okwenzelwe wena ne-yoga ongumgibeli futhi ofuna ukungena kwifomu lakho lomgibeli ohamba phambili. Kusukela maphakathi noJuni kuya maphakathi no-Agasti, siphinde sibe nohlelo lwasehlobo olunamakilasi ajwayelekile e-SUP (Stand Up Paddleboard) Paddling, SUP Yoga kanye ne-SUP Fys e-Askfatshamnen Dalarö. Nge-Dalarö Surf Point, sinikela ngezifundo zokushaywa ngumoya futhi siqasha amabhodi e-SUP nge-kayaking yakho. Siphinde sihlele imisebenzi nemicimbi ngokwesicelo sayo
Kuvulandi kaSeglarbaren unepaki yokuqala yokungena kwayo yonke itheku. Lapha ungadla izitsha ezilula, uphuze ikhofi noma uzipholele ngobhiya obubandayo. Uma unezingane nawe, kunenkundla yokudlala eseduze. Inkundla yegalufu elincane, inkundla yebhola kanye nenkundla yevolibholi nakho kungumakhelwane weSailing Bar. Ivula iviki le-Midsummer. Ungabhalisela imicimbi yephathi kusuka ngoMeyi kuya kuSepthemba.
IGålö iyisihlonhlo nenqolobane yemvelo enezimbali ezinhle kakhulu. Ufika lapha ngemoto noma ngebhasi. Kunamakhilomitha angaphezu kuka-7000 emizila yokuhamba izintaba ebabazekayo kanye nomkhondo we-Stone Age onezinsalela ezivela kubazingeli bokuqala bezimpawu ngemuva kweminyaka eyi-XNUMX yeqhwa. Olwandle olunesihlabathi olude kunayo yonke iStockholm luheha izivakashi eziyisigidi unyaka nonyaka ezindaweni zokugeza zasolwandle, amakamu, izindawo zasemaholidini, amahostela nezindawo zokudlela zasemapulazini. EMorarna kunemnyuziyamu encane, imakethe yezikhunta kanye nendawo yokudlela. Kuvulwa ngeSonto. Njalo ngeminye iminyaka, imayela lamalahle likhanyiselwa iGålö.
Isikebhe setekisi i-Utö Värdshus
Uma ufuna ukuphuma ngaphandle kohlu olujwayelekile lokuvakasha izikebhe, ungaqasha kalula isikebhe setekisi nathi! Imikhumbi yethu yezikebhe zamatekisi inezikebhe zamatekisi ezimbili ezincane nezisheshayo ezingafika kubantu abayisithupha kanye nesikebhe samatekisi esikhudlwana kancane esithwala abagibeli abayi-6. Izikebhe zisemgwaqweni phakathi nenkathi engenaqhwa. Siqala echwebeni lasekhaya i-Utö futhi sisebenze cishe sonke isiqhingi saseStockholm, yize iningi lezimoto litholakala eziqhingini eziseningizimu. Ukubhuka kwenziwa ku-12-08 504 203 ngesikhathi samahora okuvula avamile ka-Utö Värdshus.
I-Ornö eziqhingini eziseningizimu zeStockholm ingesinye seziqhingi ezinkulu zaseSweden. Lesi siqhingi sakhiwe kusukela ngeBronze Age futhi sinamatheku emvelo ambalwa kanye nomlingiswa osekhulile onamapulazi amadala namachibi amaningana amancane, ajulile. Indlela engcono yokuthola imvelo ehlukahlukene ka-Ornö ngebhayisikili noma ngokuhamba ngezinyawo. Bona ama-orchid eMane meadow. Kulabo abafuna ukulala ubusuku bonke, kunamahhotela, amahostela nezindlwana. Kukhona isikebhe semoto neWaxholmsbåt esisuka naseDalarö.
Esiqhingini saseHaninge esiseningizimu, neHårsfjärden ngasentshonalanga kanye nechweba elikhulu iMysingen ngaphandle elibheke olwandle, kulele uMuskö. Lapha, ibutho lasolwandle laseSweden lalinenkaba yalo eyinhloko kusukela ngekhulu le-1500 kuze kube ngo-1967. Isizinda esikhulu semikhumbi yempi esihlala endaweni enkulu njengeDolobha Elidala eStockholm siqhunyiswa edwaleni. Ngawo-1960, kwakhiwa umhubhe phakathi kweMuskö nezwekazi. Umhubhe wemoto ucishe ube ngamakhilomitha ama-3 ubude futhi ugijima ujule ngamamitha angama-66 ngaphansi kwe-bay. EMuskö kunezindlu ezimbili ezinkulu zekhulu le-1700, i-Arbottna neLudvigsberg.
I-Ekudden yindawo yakho ehlela amakamu, izifundo, izingqungquthela noma imikhosi yangasese. Ziphekele ukudla kwakho emakhishini ethu amakhulu, athandekayo, u-ode ukudla epulazini lethu elingumakhelwane noma ungathanda ukuthi umpheki wakho eze azokupheka ukudla kwakho esizeni? Nathi, kulula ukubhuka nokwenza imihlangano ngokwemibandela yakho.Nezindawo zokosa inyama, i-sauna, i-sandy beach, i-jetty nenkundla yebhola, kulula ukuhlala futhi uchume. Mhlawumbe yingakho izivakashi zethu zibuya unyaka nonyaka! Sinikeza izinketho ezifana nokuhlanza kanye namashidi namathawula wokubhuka kwakho. Futhi thatha ithuba ukubhuka ubhavu wethu oshisayo oshisayo! Siyasiza
I-SkiMarine & "Just Ride Cable"
Isikhungo semidlalo yamanzi eningizimu yeHaninge / Runsten enesitolo, ikhefi nengqungquthela, eduze kwaso yichibi lethu elisanda kumbiwa elinemoto yekhebula kagesi yokushushuluza emanzini, i-wakeboarding ne-kneeboarding. Ungaphinde ugwedle i-SUP, ubhukude noma uphumule nje. Isikhungo semidlalo yamanzi esisebenza ngogesi nangokwemvelo esingaqhathaniswa nokuphakanyiswa kokushushuluza emanzini, ucingo luhamba luzungeze isiyingi ngemibhoshongo emi-5 cishe ngamamitha ayi-10 ukuphakama futhi intambo / isibambo se-skier sixhunywe ngezikhathi ezithile lapho ungaya khona emanzini ukushibilika eqhweni, ukugibela amabhodi okubhaka noma ukugoqa ngamadolo. Ipaki ivulekele bonke ubudala, abaqalayo futhi athuthukile. Ukukwazi ukubhukuda kuyimfuneko.
E-Hemviken enhle uzothola uSmådalarö aye emahhotela nasezinkomfeni. Lapha uphumula noma uhlanganyela komunye wemisebenzi eminingi etholakalayo. Isithabathaba somuzi sakhiwa ngo-1810 njengendawo yokudlela kanye nephathi yomnikazi wokuqala. Isakhiwo esikhulu selokhu sengezwe ngepiyano enkulu yehhotela, igumbi lokudlela kanye ne-olintshi. Noma ngabe uza lapha ngesikebhe noma ngemoto, noma ngabe uhlala ubusuku noma emini nje, ungakujabulela ukudla okuphekwe kahle, imvamisa enesihloko seziqhingi endaweni ethokomele nenesizotha. Ukubukwa okumangazayo kolwandle kuqinisekisiwe ukukhulisa ulwazi.
Ipulazi lomndeni eliphilayo, eli-1km ukuya eGålö. Sinezinkomo zobisi ezingaba ngu-40 nezilwane ezincane ezingaba ngu-80 ezigcina amadlelo amahle e-oki evulekile. Iziqhingi eziseziqhingini ezimnandi zaseStockholm. Ngesikhathi sehlobo sinendawo yokudlela epulazini, indawo ekubhakelwa kuyo epulazini kanye nendawo yokudlela yasepulazini. Hlala phansi ithala lethu futhi ujabulele ukubuka kwamasimu nezihlahla ze-oki. Sifuna uzwe isimo somndeni futhi sethemba ukuthi sinambitheka kahle ngokudla okwenziwe ekhaya nesinkwa sethu esihle sekhofi.
IBjörnö isiqhingi esincane esiseduze naseDalarövägen esinokuxhumeka kwebhuloho kanye nomgwaqo wemoto oya endlini. Eduze neGålö, Dalarö futhi cishe ngamakhilomitha angama-35 ukuya eStockholm. Uhlala endlini yakho cishe ngamamitha-skwele angama-35, imibhede emi-2 (+2 embhedeni wosofa), i-WC, ishawa, amanzi ashisayo namakhaza, ifriji / ifriji, isitofu / ihhavini, indawo yokubasa umlilo, imicrowave, i-Wi-Fi, i-TV. Ukubukwa kwechibi namamitha angu-50 ukuya kubhavu lolwandle. Inani: SEK 400 umuntu ngamunye / ubusuku (iminithi ubusuku obungu-2). Kufakwe nelineni lokulala, amathawula nokuhlanzwa kokugcina. Ukudla kwasekuseni ngemali eyengeziwe. Xhumana nathi ukuthola imininingwane, izithombe nemephu. Åke noBirgitta Hansson Ucingo: 0708 764 540. I-imeyili: abhansson@spray.se
Indawo yamatende e-Utö
E-Utö kunelinye lamakamu amahle kakhulu kulezi ziqhingi. Ngasolwandle, ngombono omuhle wetheku eliseningizimu neMysingen - kanye nolwandle olunesihlabathi kakhulu ngqo eduze nekamu! Indawo yokukhempa ine-cottage enezindlu zangasese, izihlambi kanye nendawo encane enama-hotplates. Indawo yokukhempa ingeyemodeli yangaphandle futhi ayinazo izindawo ezinenombolo, ngakho-ke abantu abadingi ukuzibekisela indawo. Amakilasi ezikole namaqembu amakhulu, ngakolunye uhlangothi, adinga ukubhuka kusengaphambili. Ukubhuka nolwazi ungathinta uHamnboden ngocingo: 08-501 57 450
Uyemukelwa esikebheni sesikebhe seCold War torpedo eGålö ukuthola okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka emoyeni wangempela wesikebhe we-torpedo kanye nomuzwa omnandi wokujabulela iziqhingi ngejubane lesikebhe se-torpedo.
IDalarö iyi-idyll yomlando egcinwe kahle engamakhilomitha angama-40 ukusuka eStockholm C. Nazi izindlu zokuhlala ngenjabulo yombazi kanye nemigwaqo emincane ejiyile. Vakashela iTullhuset nehhovisi lezokuvakasha, imnyuziyamu, indawo yokudlela nebha. Emanzini asuka eDalarö - endaweni yokugcina yamasiko yasolwandle yaseSweden - yimikhumbi yokhuni egcinwe kahle kunazo zonke emhlabeni kusukela ngekhulu le-1600. Emzaneni kunezindawo zokudlela nezitolo. Uyemukelwa eDalarö - vula unyaka wonke - ngesimo sezulu esihle kakhulu saseStockholm.
U-Almåsa Havshotell / iSvartkrogen
Endaweni enhle yeziqhingi, i-Almåsa inikeza indawo yokuhlala emakamelweni awodwa noma aphindwe kabili - onke anebhalkhoni noma kuvulandi, iningi elinokubukwa kolwandle. Isidlo sakusihlwa singathathwa endlini yama-manor noma kubhukhelwe kusengaphambili isidlo esiyingqayizivele eSvartkrogen (ngeMigqibelo ekhethiwe kufanele ibhukishwe kusengaphambili), i-Almåsa inikeza imisebenzi emikhulu unyaka wonke, yamaqembu nezinkomfa. Kuningi ongakuthola ngaphakathi nasezindaweni ezizungeze i-Almåsa. Sincoma ukuhamba ngezendalo, ukuqinisa ama-dives olwandle kusuka olwandle olunesihlabathi nezinsika.
Sinikeza ukunambitheka kwewayini nokunambitha iwayini lethu lase-Italy, izitsha ze-pasta, ushizi nemikhiqizo ye-charcuterie. Ukukhethwa kokuhlangenwe nakho kokudla okuhle kwe-Italy. Ukupheka, ukunambitha iwayini ekhaya lakho noma emagcekeni, kuya ngezifiso zakho. Bhuka i-aphoyintimenti kusengaphambili. Oda nge vinprovning@gustavino.se. Ukwamukelwa ngemfudumalo kubingelela uCarlo Taccola, GustaVino AB Ucingo: 070 7982448
IGålö Havsbad-vula unyaka wonke IGålö Havsbad iyisikhungo sesimanje sokuvakasha esiphakathi kwenqolobane yemvelo nogu lolwandle, ihlathi, ulwandle nemizila yokuhamba izintaba ezungeze ikamu lezinkanyezi ezine elineziza ezinkulu zezimoto, amaravani namatende. Amakotishi anethezekile, amahostela kanye nasehlobo lamatende akhazimulayo ka-4. Ihostela elinamakamelo aphindwe kabili angama-2021 anemibhede eyodwa Izindawo ezinkulu eziluhlaza namathuba okuhlela imihlangano yeklabhu, inhlangano noma umhlangano weklabhu. Amakamelo enkomfa nawomhlangano afika kubantu abayi-8 akunikeza ithuba lokuhlela amaphathi, imihlangano, ukukhahlela endaweni enhle yeziqhingi. I-bistro yasehlobo, ukuqasha
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång reserve nature, Gålö nature reserve, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe castle, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandemardaladala park, National Park ipaki, i-ölö, i-starsta Castle, i--ster- neVästerhaninge
Copyright © 2022 Izihloko ze-UX
Kuzothunyelwa iphasiwedi ekhelini lakho le-imeyili.
Imininingwane yakho izosetshenziselwa ukuthuthukisa ulwazi lwakho kuwebhusayithi, ukuphatha ukufinyelela ku-akhawunti yakho nezinye izinjongo ezichazwe kweyethu Inqubomgomo yobumfihlo.